Fahafatesana tao an-tokantrano :: Karohina ny lehilahy ahiana ho namono ny vadiny • AoRaha
Fahafatesana tao an-tokantrano Karohina ny lehilahy ahiana ho namono ny vadiny
Ahiana mafy ho tompon’antoka tamin’ny fahafatesan’ny vadiny ny lehilahy iray karohin’ny polisy, any Mahajanga. Namoy ny ainy nisy namono tao an-tranony, tao amin’ny fokontany Aranta, tamin’ny alin’ny talata lasa teo, ilay renim-pianakaviana, iraika amby telopolo taona. Voa­tsindrona hazo maranitra fiki­kisana trondro ny fihirifany.
Tsy hita nanomboka teo ny vadiny, izay fantatra fa niaraka taminy farany tao an-trano, ny alina nisehoan’ ny vono. Izy no niantefan’ny ahiahy voalohany.
Hitan’ny zanany vavy voalohany nihoson-dra tao an-tranony ny vatana manga­tsiakan’ilay renim-pianakaviana ny antoandron’ny alarobia. «Izy mivady irery no tao an-trano, tamin’io alin’ny talata io. Tsy fantatra izay mety ho fifamaliana na adiady teo amin’izyireo. Mahazatra an’ilay ramatoa ny mametraka ny fanalahidy ao amin’ny mpifa­nila vodirindrina aminy, rehefa hivoaka ny maraina. Tsy nanao izany anefa izy, ny marainan’ny alarobia», araka ny fitantaran’ny mpitandro filaminana, any Mahajanga.
Tonga maraina teny Aranta ny zanak’izy ireo vavy izay natory tany amin’ny fianakaviany. Nihidy ny trano. Nanontaniana ny mpiara-monina rehetra saingy samy nihevitra fa efa lasa nivoaka maraina toy ny fanaony ilay renim-pianakaviana.
«Tsy nahandry ilay zanaka vavy ka novakiany ny varavarana, tamin’ny 10 ora antoandro. Teo no nahitana ny fatin’ny reniny. Nisy loaka ny fihirifany. Nampandrenesina haingana ny lehiben’ny fokon­tany sy ny polisy », araka ny fanazavana.
Efa eo am-pelantanan’ny polisy mpanao famotorana lalina ny mombamomba ny vadin’ilay namoy ny ainy. Mitohy ny fikarohana azy.
Razana tao anaty rano :: Feno ratra ny tarehin’ilay lehilahy hita tao Ikopa
Lozam-pifamoivoizana :: Mpandeha môtô maty tsy tra-drano